Nhau - Yemvura Inonyudza LED Ice Cube
Inoshandiswa zvakanyanya mune dzakasiyana zviitiko zvekupemberera kana mabhawa ehotera uye dzimwe nzvimbo, ichigadzira yakapfava uye inoyevedza kudanana mamiriro zvisingaonekwe.
Chiedza-chinoburitsa mazaya echando anoumbwa neyekudya-giredhi PS zvigadzirwa uye zvemagetsi zvinhu zvine hunhu hwekupenya kana uchipinda mumvura (mvura induction)
Chigadzirwa chinoshandisa mwenje-kuburitsa echando machubhu anoumbwa nechikafu-giredhi PS zvigadzirwa uye zvemagetsi zvigadzirwa, izvo zvine hunhu hwekupenya kana uchipinda mumvura (mvura induction), uye kutaridzika kwayo kwakaita kunge chaiwo machubhu echando. Kune zvigadzirwa zvemagetsi zve LED mukati mechigadzirwa, izvo zvinogona kuiswa mumhando dzese dzezvinwiwa kuti uwedzere kudanana uye kusanzwisisika mamiriro. Inoshandiswa zvakanyanya mune dzakasiyana zviitiko zvekupemberera kana mabhawa ehotera nedzimwe nzvimbo. Inoenderera yekuvhenekera nguva: 8-25 maawa.
Chinja maitiro: induction yemvura, vheneka kana wabatwa nemvura Usage: Chenesa iyo inopenya chando cube ndokuiisa mumvura, inozongo penya, chigadzirwa chinoraswa, Cherekedza: Usamedze, uye dzivisa kuzviisa muchinwiwa chakanyanya kupisa.
Chiyeuchidzo: Inogona kudhakwa nemazaya echando, asi haugone kuwedzera zvinwiwa zvine tembiricha yakanyanya.
Bhatiri iri Isingadzoreke, mushure mokuburitsa mazaya echando kubva pamvura, Inovhenekera kunyangwe iwe ukaibata pasi neruoko Hunhu tsananguro Iyo mwenje-inoburitsa echando machubhu anoumbwa nechikafu-giredhi PS zvigadzirwa uye zvemagetsi zvinhu zvine hunhu. yekuve inopenya kana uchipinda mumvura (liquid induction), uye iyo chitarisiko chakaita kunge chaiwo machubhu echando. Chigadzirwa chacho chine bhatiri-inofambiswa, haina shanduko yemakemikari, haina chepfu uye haina kukuvadza, uye inogona kuiswa muzvinwiwa zvakasiyana siyana kuti iwedzere mamiriro erudo uye asinganzwisisike. Inoshandiswa zvakanyanya mune dzakasiyana zviitiko zvekupemberera kana mabhawa ehotera nedzimwe nzvimbo.
Post nguva: Aug-30-2021